I-watchOS 7.4 yongeza umsebenzi we-Apple Watch ECG e-Australia naseVietnam | Ndisuka mac
UManuel Alonso | | Apple Watch
Izolo ekunikezelweni komsitho wasentwasahlobo ka-Apple, phakathi kwezinye izinto ezininzi, inkampani yaseMelika yazisa ngohlobo lwewatchOS 7.4 yokukhupha umgqatswa kwaye yaqinisekisa ukuba ingxelo yokugqibela iya kuba sele iphelile le veki. Ngenkqubo entsha yokusebenza, imisebenzi emitsha iyongezwa, ngakumbi ukukwazi ukuvula i-iPhone nge-ID yobuso xa usebenzisa imaski. Kodwa umsebenzi we-electrocardiogram ukongezwa kwimimandla ye Ostreliya neVietnam.
Kancinci imisebenzi ye-Apple Watch Asasazeka kuzo zonke iingingqi zehlabathi. Ingakumbi imisebenzi enento yokwenza nempilo yomsebenzisi. Omnye wale misebenzi, i-Electro Cardiogram, sele ibonakalisiwe ibalulekile kubantu abaninzi. Abantu abasindise ubomi bakho enkosi kwinto yokuba ezinye iingxaki ziye zafunyanwa ngexesha. Kungenxa yoko le nto kusoloko kuqondwa ukuba le misebenzi iyasasazeka kwihlabathi jikelele.
NgewatchOS 7.4 umsebenzi we-electrocardiogram kwaye ke ukuthintela iingxaki zentliziyo kufikelele kumazwe ase-Australia naseVietnam. Oku kuza ngaphezulu kwenyanga emva kokuba urhulumente waseAustralia uLawulo lweeMveliso zoNyango lwamkele inqaku. Sele siyazi ukuba isicelo se-ECG kufuneka ivunywe ngoorhulumente basekhaya, kuba ingumsebenzi wezonyango, ngokungafaniyo nomlinganiso weoksijini woluhlu lwe-Apple Watch 6 esisibonisi kodwa esingathathelwa ngqalelo njenge-ECG.
Sele siyazi ukuba ukongeza ukubandakanya le misebenzi kule mimandla, ingxelo entsha yenkqubo yokusebenza yokubukela iza nezinye Iindaba ezimnandi kakhulu:
Ukwazi ukuvula i-iPhone usebenzisa i-ID yobuso cisikhukukazi sinxiba imaski.
Ukhetho lokuhlela uhlobo lwesixhobo Bluetooth kwiiSetingi zokuchongwa kweefowuni echanekileyo yezaziso zomsindo
Amandla okusasaza umxholo weaudiyo kunye nevidiyo ukusuka ku-Apple Fitness + ukusebenza koomabonakude nakwizixhobo ezifanelekileyo AirPlay 2
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-watchOS 7.4 yongeza umsebenzi we-ECG we-Apple Watch e-Australia nase-Vietnam